I-PhoneWagon: Konke Okudingayo Ukuze Usebenzise Ukulandelwa Kwezingcingo Ngezibalo Zakho | Martech Zone
Njengoba siqhubeka nokuxhumanisa imikhankaso yeziteshi eziningi eyinkimbinkimbi yamanye amaklayenti ethu, kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi ucingo lukhala nini futhi ngani. Ungangeza imicimbi ku- Izinombolo zocingo ezixhumene ukuqapha izibalo zokuchofoza ukuze ushayele, kepha imvamisa lokho akunakwenzeka. Isixazululo ukusebenzisa ukulandelela ikholi bese uyihlanganisa nezibalo zakho ukubona ukuthi amathemba aphendula kanjani ngezingcingo.
Izindlela ezinembe kakhulu uku khiqiza ngamandla inombolo yocingo kumthombo ngamunye ongaphakathi kwamakhodi endawo afanayo. Ngale ndlela lonke ucingo olungenayo olulodwa ingalandelelwa ngokunembile ibuyele emthonjeni womkhankaso noma kokuphakathi oyidalele kona. Ngokwengeziwe, futhi ungaba nekholi yokukhiqiza ifayela le- Ukuvakashela ku-Google Analytics kundlela ebonakalayo ongayifaka ekulandeleni ukuguqulwa.
Lokhu konke kudinga ukuthi ube nensizakalo efana nayo IfoniWagon, isevisi eyakhelwe ngokukhethekile ama-ejensi wokumaketha ukuphatha amaklayenti abo okulandelela amakholi
Izici ze-PhoneWagon Faka:
Ukusetha Inombolo Yefoni Okusheshayo - I-PhoneWagon inikeza ideshibhodi enembile futhi esebenziseka kalula ukuthi noma ngubani angaqonda futhi azulazule. Ngokuchofoza inkinobho, uyakwazi ukusesha ngokushesha noma iyiphi ikhodi yendawo bese wengeza inombolo yocingo. Ngemizuzwana engaphansi kwengu-30 ungangeza inombolo yocingo, ulungiselele inombolo, bese uqala ukusebenzisa ngokushesha.
Izinombolo Zamazwe Ngamazwe - Ifoniwagon inikeza izinombolo zocingo zomhlaba jikelele emazweni angaphezu kwama-80. Ideshibhodi yethu elula ikuvumela ukuthi useshe inombolo yocingo ngezwe nangekhodi lendawo. Ngemizuzwana engaphansi kwengu-30 ungalungiselela inombolo yakho yocingo yamazwe omhlaba bese uqala ukuyisebenzisela imikhankaso yakho.
Izinombolo zocingo zasendaweni - Izinombolo zocingo zendawo zifakazelwa ukuthi ziguqula ngaphezulu kunezinombolo zamahhala zemikhankaso yamabhizinisi amancane yasendaweni. Noma ngabe udinga inombolo yocingo yasendaweni edolobheni elithile noma umane nje uyikhodi yendawo, i-PhoneWagon ikuvumela ukuthi ungeze izinombolo zocingo zasendaweni ngemizuzwana engaphansi kwengu-30.
Izinombolo Ezingakhokhelwa - Izinombolo zocingo ezingakhokhelwa zilungele imikhankaso yezentengiso kazwelonke. Banganika inkampani yakho ukubukeka njengobukhona ezweni lonke futhi banikeze amakhasimende indlela yokukubiza mahhala. Kudeshibhodi yethu ungangeza kalula izinombolo zocingo ezingakhokhelwa ezivela ezinhlobonhlobo zezinketho ezifana no-888, 866, nezinye. Kuthatha ngaphansi kwemizuzwana engama-30 ukufaka inombolo yocingo engakhokhelwa nokuyilungisa.
Thumela Izinombolo Zakho Zamanje Zefoni - Ingabe ufuna ukusebenzisa inombolo yakho ekhona yefoni noma uhambise izinombolo onazo ngomunye umhlinzeki wokulandela ngomkhondo ucingo ku-PhoneWagon? Kulula. Singahambisa izinombolo zakho ku-PhoneWagon ngenqubo ebizwa nge- "porting". I-Phonewagon inakekela konke ukuphakamisa okunzima futhi izoba nezinombolo zakho ku-akhawunti yakho ye-PhoneWagon ngokushesha.
Shayela ukurekhoda - Ukulandela nje izingcingo akwanele. Ukulalela ukuqoshwa kwamakholi kuzokusiza uqeqeshe abasebenzi bakho ekusebenziseni lokho abakushoyo ukuguqula izingcingo eziningi zibe amakhasimende akhokhelayo. Ukurekhodwa kwezingcingo nakho kuyindlela enhle yokubuyela emuva bese uthatha ucezu lolwazi okungenzeka ukuthi ukhohliwe ukulubhala phansi ngesikhathi socingo. I-PhoneWagon ikuvumela ukuthi urekhode izingcingo noma noma yiziphi izinombolo zakho zefoni bese ukhetha ukudlala umyalezo wokubingelela ukwazisa omunye ofonayo ukuthi ucingo luyarekhodwa.
Whisper Imilayezo - Imiyalezo yethu yokuhleba iyindlela enhle yokunikeza umenzeli noma umsebenzi ophendula ucingo ukuqonda okuthile ukuthi ucingo luvelaphi. Lapho bephendula ucingo, ungadlala umyalezo kubo njengokuthi “le kholi ivela emkhankasweni wakho wekhadi leposi ngomnikelo wesaphulelo seholide”. Ama-ejenti manje anomongo othile ocingweni futhi angakwazi ukuhlela ukuthi ahlangana kanjani nekhasimende ngokususelwa kulolo lwazi. Kufana nekhodi yokukopela ekusiza ukuthi uwine.
Imilayezo Yokubingelela - I-PhoneWagon ikuvumela ukuthi udlale umyalezo wokubingelela kulowo oshaya ucingo ekuqaleni kocingo. Ungakhetha ukurekhoda umyalezo wokubingelela wangokwezifiso ngokusebenzisa amathuluzi wethu wokusebenzisa imilayezo elula noma ulayishe umyalezo okhona ovela kufayela le-MP3. Imiyalezo yokubingelela ingenisa ibhizinisi lakho futhi inikeze amakhasimende akho umbono wobuchwepheshe noma ungavele wazise oshayayo ukuthi ucingo luyarekhodwa.
Ukumaka Ngokwezifiso Ngokwezifiso - Ukumaka izingcingo kukusiza ukuthi uhlukanise, uhlele, noma uhlukanise izingcingo ngokususelwa kunoma iyiphi inqubo ofuna ukuyilandela. Sinamathegi asevele akhona afana ne- "new lead", "inombolo engalungile", "ikhasimende elikhona", njll. Siphinde sinikeze amandla okwenza amathegi wangokwezifiso ngemibala yangokwezifiso ngqo kusuka kudeshibhodi yethu. Ngemuva kwalokho ungaqhuba umbiko ukubona ukuthi zingaki izingcingo (noma zingaki abafonayo okokuqala) ezakhiwe kumaki ngamunye.
Ring kanyekanye - Isizukulwane sokuhola siphathelene nejubane. Ngokushesha uphendula, noma uphendula ifoni, umkhondo owengeziwe ozowuguqula ube amakhasimende akhokhelayo. Sinikeza ikhono lokushaya amafoni amaningi ngasikhathi sinye. Umuntu wokuqala ozophendula uzoxhuma koshayayo. Lokhu kusiza ukunciphisa izikhathi zokulinda zamakholi angenayo, kuletha umuzwa ongcono wamakhasimende, futhi kukhiqize ukuthengisa okuningi.
Ama-akhawunti womsebenzisi angenamkhawulo - I-PhoneWagon ikuvumela ukuthi ungeze abasebenzisi abangenamkhawulo ku-akhawunti yakho. Sinikeza izindima eziningi zomsebenzisi ngezimvume ezahlukahlukene ukuze unikeze ukungena ngemvume kuwo wonke umuntu futhi bazokwazi ukufinyelela kuphela lokho abakudingayo ukufinyelela.
Ama-Akhawunti Amakhasimende - I-PhoneWagon yakhelwe ukudala izinkampani eziningi noma izindawo ku-akhawunti ngayinye. Lokhu kukwenza ukwazi ukugcina idatha yakho iboshelwe enkampanini efanele noma indawo njengoba wenza nje kuzikhangiso ze-Google. Ama-ejensi wokumaketha angangeza wonke amaklayenti awo futhi anikeze ukungena ngemvume kweklayenti ngalinye elizokwazi ukufinyelela olwazini lwalo kuphela.
Izifinyezo ze-imeyili - Ngabe ufuna ukuthola i-imeyili enayo yonke imininingwane emayelana nezingcingo zakho ngaphandle kokungena ngemvume kudeshibhodi yakho? I-PhoneWagon inikeza ukufingqwa kwe-imeyili nsuku zonke, masonto onke, noma ngenyanga. Ungenza ngendlela oyifisayo lawa ma-imeyili futhi uze uwathole evela esizindeni sakho. Lokhu kuvumela ama-ejensi wokumaketha ukuthi agcine umkhiqizo wawo ungaguquguquki lapho exhumana namakhasimende.
Izexwayiso Zokushaya Nge-imeyili - Izexwayiso zekholi ye-imeyili noma izaziso ze-imeyili zikuvumela ukuthi uthumele i-imeyili ngokuzenzakalela noma kunini lapho kukhona ikholi entsha evela kunoma yimuphi umkhankaso noma ungayisetha ukuthi ithumele kuphela imikhankaso ethile. Uyakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo la ma-imeyili ukuze uwathumele usuka esizindeni sakho (isb. “Notifications@yourdomain.com”) ukuze ugcine uphawu olufanayo lapho uxhumana namakhasimende akho.
Ukubika Okuthuthukisiwe - Finyelela kalula imibiko eqinile ngokususelwa kudatha yakho yocingo. Bona idatha enokuqonda njengokuthi imiphi imikhankaso eshayela izingcingo eziguqula zibe amakhasimende akhokhelayo noma ukuthi zingaki izingcingo ezivela kubantu abafona okokuqala futhi ezingaphezulu kwamasekhondi angu-90. Sebenzisa le datha ukwenza izinqumo ezihlakaniphile ngemali oyisebenzisile kanye / noma ukuqeqesha amaklayenti akho ukuthi angenza kanjani umsebenzi ongcono wokuguqula izingcingo zibe amakhasimende akhokhelayo.
Izinombolo zefoni ezinamandla - Izinombolo zefoni ezinamandla zikwenza ukwazi ukulandelela ukuguqulwa kwezingcingo ngendlela efanayo olandelela ngayo ukuguqulwa kwefomu lewebhu. Sikunikeza umugqa owodwa wekhodi ongayengeza kuwebhusayithi noma ekhasini lokufika bese senza konke okunye. Izingcingo zilandelwa esimisweni sezivakashi futhi uthola idatha yokuthi isivakashi sivelaphi, isikhangiso abasichofozile, ikhasi lokufika abahlala kulo, nokunye okuningi. Dala inombolo enamandla kudeshibhodi yakho ngemizuzwana engaphansi kwengu-30 bese uqala ukulandelela ukuguqulwa kwezingcingo ukuze uthole isithombe esiphelele ngokwenzekayo ngemikhankaso yakho yokumaketha.
Ukuvakashelwa Kwezinga Lokungena Negama elingukhiye - Sinikeza ukulandelwa kwezivakashi nezinga elingukhiye usebenzisa izinombolo zethu ezinamandla. Njengoba isivakashi ngasinye siboniswa inombolo eyingqayizivele, siyazi lapho leso sivakashi sibiza inombolo eyingqayizivele ekhonjisiwe kubo ngakho-ke singakwazi ukuthi ucingo lwabo luye esimisweni sabo. Lokhu kusinikeza idatha eyimbudumbudu emangalisayo njengegama elingukhiye abaliseshile neqembu lesikhangiso abavela kulo.
Ukuhlanganiswa kweGoogle Analytics - I-Phonewagon inikeza ukuhlanganiswa okuqondile kwenkampani ngayinye ku-akhawunti yakho ye-PhoneWagon ne-Google Analytics. Ungadudula zonke izingcingo zakho ungene ku-Google Analytics njengemicimbi ukuze ubone kahle ukuthi kwenzekani nokuthi ushintsha kangaki oshayelayo, ngisho nakule micimbi engaxhunyiwe ku-inthanethi.
I-Google Adwords Integration - I-PhoneWagon ihlangana ngqo nezikhangiso ze-Google (ngaphambili i-Google Adwords). Ngokuchofoza okukodwa, ungahlanganisa inkampani ngayinye kwi-akhawunti yakho ye-PhoneWagon ne-akhawunti yakho ye-MCC Google Ads, ukhethe i-akhawunti engaphansi, bese ngaso leso sikhathi sakha isenzo sokuguqula esisha esibizwa nge-PhoneCalls esizosunduza ukuguqulwa sibe yizikhangiso ze-Google kuzo zonke izingcingo ezivela kuzimo zakho ezinamandla inombolo kuleyo nkampani.
Umlayezo wombhalo ozenzakalelayo - Dala impendulo yombhalo yezingcingo ezingabanjwanga neminye imicimbi. Lokhu kukusiza ukuthi uhlanganyele namakhasimende ngendlela ayithandayo yokuxhumana, ukuthumela imiyalezo, futhi awavimbele ekushayeleni umncintiswano uma ungaphenduli ifoni yakho.
I-PhoneWagon itholwe ngu I-CallRail, omunye umholi kuma-analytics wokulandelela izingcingo.
Qala isilingo sakho samahhala nge-PhoneWagon
Ukudalulwa: Sithanda i-PhoneWagon kangangokuba sesiyiNxusa labo!
Tags: iqembu lesikhangisoukulandelela ikholishayela ukulandelela izibaloizikhangiso ze-googlei-google adwordsI-google analyticsindawoukulandela ifoniifoni